Qorshaha Shaacinta Xayeysiiska Google ma qabsan doonaa? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Qorshaha Shaacinta Xayeysiiska Google ma qabsan doonaa?
Google ayaa ku dhawaaqday wax cusboonaysiin ah oo ku saabsan sida ay u qorshaynayso inay ku wargeliso isticmaaleyaasha xayeysiisyada ay arkaan, oo ay ku jiraan nooc cusub oo schema ah, iyo sidoo kale ta ugu dambaysay ee soo jeedinta Sanduuqa Qarsoodiga ah si loo maareeyo adeega xayaysiiska, cabbiraadda iyo wax ka badan iyada oo aan lahayn cookies-ka qolo saddexaad iyo isgoysyada la socoshada jimcaha.
Qorshaha Shaacinta Xayeysiiska Google waxay tijaabinaysaa aaladda Daah-furnaanta Xayeysiiska oo ku tiirsan waxa ay ugu yeedho qorshaha Shaacinta Xayeysiiska si ay u tusto isticmaalayaasha macluumaadka ku saabsan xayaysiisyada loogu adeego boggaga internetka.
Qalabka Daah-furnaanta Xayeysisku wuxuu hadda diyaar u yahay kordhinta Chrome-ka ee marxaladda alfa. (Waxa kale oo aad awood u siin kartaa biraawsarkaaga Microsoft Edge haddii aad ogolaato kordhinta dukaamada kale.)
Halkaa marka ay marayso qalabku waxa uu muujinayaa oo kaliya xogta xayaysiisyada lagu soo gatay Google Ads ee fuliyay qorshaha Shaacinta Xogta. Google waxa ay rajaynaysaa in qorshahani uu la qabsado xayaysiisyada kale ee iibiya. Ka eeg bogga Github noocyada xogta ay taageeri karto.
Ujeeddadu waa in loo oggolaado isticmaaleyaasha inay arkaan "macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan xayeysiisyada ay ku arkaan shabakadda," laakiin waxay u baahan doontaa in la helo gadnaansho ballaaran iyo hirgelinta qorshaha Shaacinta Xayeysiiska si halkaas loo gaaro.
Marka kordhintu aysan ogaan karin wax xayeysiis ah oo ku yaal bogga, waxaad arki doontaa fariintan: "Hadda waxay muujin kartaa oo kaliya macluumaadka ku saabsan xayaysiisyada bandhigga ee lagu soo iibsaday Google Ads. Xayeysiisyadani waxay hirgeliyeen Qorshaha Shaacinta Xayeysiiska cusub. Sida kuwa kale u hirgeliyaan Qorshaha Daah-furka Xayeysiiska HTML-ka xayaysiisyadooda, iyaguna halkan ayay kasoo muuqan doonaan.
Haddii ay ogaato xayaysiisyada, markan waxa ay si fudud u taxaysaa tirada xayaysiisyada la ogaaday iyo meelaha loo isticmaalo in lagu soo iibiyo - hadda Google kaliya. Fikradda ayaa ah in lagu daro macluumaadka ku saabsan sababta xayeysiinta loogu adeegay. oo ku dar kontaroolada kale ee qalabka.
Tabaha Hay'adaha ayaa taxaya dhammaan shirkadaha iyo adeegyada leh joogitaanka bogga - shabakadaha gudbinta macluumaadka ama bixiyeyaasha falanqaynta, iwm.
Ku saabsan xayeysiiskan. Raadinta cusub ee daah-furka xayeysiiska ee la tuso isticmaalayaasha waxaa loogu yeeri doonaa "Ku saabsan xayeysiiskan." Waxa ay wali sii wadi doontaa in lagu muujiyo qaybaha "Sababta xayaysiiskan" iyo "Ku saabsan xayeysiiyaha" Xogta xayaysiisiyaha ee la xaqiijiyay waxa laga soo saaray akoonkaaga Xayeysiiska iyada oo qayb ka ah barnaamijka xaqiijinta xayaysiiyayaasha ee Google u soo bandhigtay dhammaan xayaysiiyayaasha bishii Abriil.
Ku saabsan waayo-aragnimadan xayeysiiska, ee hoos lagu muujiyey, ayaa marka hore bilaabi doonta muujinta xayaysiimaha laga soo iibsaday Google Ads iyo Display & Video 360 bilaha soo socda, oo ay ku xigto qaabab kale oo xayeysiis ah 2021.
Khibrada cusub waxay soo bixi doontaa bilaha soo socda.
Google waxa ay leedahay waa maxay sababta xayaysiiskani u helo in ka badan 15 milyan oo is dhexgalka isticmaalaha maalin kasta iyo in hadda la heli karo marka xayeysiisyada Google ay ka soo baxaan TV-yada ku xiran.
Cusboonaysiinta Sanduuqa Qarsoonnimada Sanduuqa Qarsoonnimada ayaa ah hindisaha Chromium ee la soo jeediyay ee xalalka xuddun u ah sirta ee la soo jeediyay ee awood siinta xayaysiisyada siyaabo aan ku tiirsanayn cookies, aqoonsiga aaladaha ama farsamooyinka sida faraha.
"Mid ka mid ah API-yada la soo jeediyay, calaamado aamin ah oo la dagaallami kara xayaysiinta xayaysiiska iyada oo la kala saarayo bots iyo isticmaalayaasha dhabta ah, ayaa hadda diyaar u ah inay tijaabiyaan horumariyayaal, qaar badanna waxay u guuri doonaan si ay u noolaadaan dhawaan," ayuu qoray Mike Schulman,
madaxweyne ku xigeenka ilaalinta gaarka ah ee xayeysiiska iyo badbaadada Google, ee ku jirta boostada blog ee jimcaha.
Safari iyo Mozilla waxay horey u xaddideen cookies-ka qolo saddexaad Chrome-na waxaa lagu wadaa inuu meesha ka saaro 2022. Tani waxay saameyn weyn ku leedahay dhammaan nidaamka deegaanka. Tilmaamaha suuq-geynta ee la daabacay bishaan, Google wuxuu sheegay in ay soo jeedinayaan calaamaduhu inay diiradda saaraan dhisidda xiriirka tooska ah (tusaale ahaan kooxda koowaad) ee isticmaalayaasha oo ay bartaan inay u dabacsanaadaan beegsiga iyo cabbirka "marka shakhsiyeynta xaddidan tahay."
Si aad u hesho wax badan oo ku saabsan halka ay ku socoto qarsoodiga xayeysiiska iyo sida loo diyaariyo, akhri:
Sharaxaadda 'Chrome' ee 'sharraxa' xayeysiinta iyada oo aan lahayn cookies-ka qolo saddexaad
Shuruudaha SameSite ee cookies: Waxa SEO-yada iyo horumariyayaashu u baahan yihiin inay ogaadaan
Xaaladda dabagalka iyo xogaha gaarka ah ee 2020
Muddada Isticmaalka Xogta Xaddidan ee Facebook ee caadiga ah waxay dhammaanaysaa Agoosto 1: Sida loo ilaaliyo u hoggaansanaanta CCPA
Sida Loogu Iibiyo Etsy: Tusahaaga Dhammaan-in-One si aad u Bilowdo